Cabdi Qeybdiid oo mucaaraday heshiishkii DF iyo Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), ayaa wuxuu si xoogan uu kaga horyimid heshiiskii Dowladda Somaliya ay shalay la gaartay Maamul Goboleedka Puntland.
Qeybdiid oo ku sugan Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in heshiiska lala gaaray Maamulka Puntland ay u arkaan mid lagu qancinaayo Maamulkaasi, ka dib markii uu laba bilood ka hor uu xiriirkii u jaray Dowladda Somaliya.
Qodobada lagu heshiiyay, ayaa waxaa qodob ka mid ah dhigayaa in Maamul Goboleed loo soo dhiso Gobolada Galgaduud iyo Koonfurta Mudug, halka ay horey Xukuumadu u saxiixday in leys raaciyo Gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Cabdi Qeybdiid ayaa xusay in shalay ay Xukuumadu go’aamisay in leys raaciyo Gobolada Mudug iyo Galgaduud, maantana ay saxiixday in la kala qaybiyo Gobolka Mudug, oo Koonfur iyo Waqooyi loo kala gooyo.
Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in heshiiskaas uu iska hor keenayo bulshada deegaanka, isla markaana uu maamulkiisa cambaareynayo dhinacyadii wax ka saxiixay heshiiskaas oo uu ku eedeeyay in colaad lagu hurinayo.
“Heshiiskaas wuxuu ahaa mid aan dastuurka waafaqsaneyn, waa mid la doonayo in bulshada la isaga horkeeno, heshiiskaas guud ahaan 12-ka qodob waa iska hor imaanayaa, waana mid lagu kala qeybinayo maamulkii labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud ee heshiiskiisa lagu gaaray magaalada Muqdisho 30-kii bishii todobaad”ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Cabdi Qeybdiid ayaa ku eedeeyay Ra’iisul Wasaaraha inuu dalka u kala qeybinayo xuduudo qabiil, isagoo xusay in hadii la xadeynayo Gobolada ay shaqo ku leeyihiin Gudiga xuduudaha ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Ra’iisul Wasaaraha dalka wuxuu u kala qeybinayaa xuduudo qabiil ah, horta yaa xaq u leh in la xadeeyo xuduudaha gobolada, meel ay dastuurka kaga taal gobol labo haloo qeybiyo waxaa la weydiinayaa Ra’iisul Wasaaraha, waxaa cambaareynayaa isku dirka iyo iska hor keenka ay wadaan bulshada caalamka”ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka Galmudug.
Shalay ayaa heshiis Garowe ku dhexmaray dowladda federaalka ah iyo maamulka Puntland waxaa qodobaadii kasoo baxay ka mid ahaa in Woqooyiga Muqdug ay ka tirsantahay Puntland, halka Kuunfurta Mudug ka tirsanaan doonto maamulka gobolada dhexe.
Qarax gaari oo khasaare ka geystay Isgoyska Afarta Jardiino